AKHRISO: Madaxweynaha D. Deegaanka Soomaalida oo guuldarro siyaasadeed iyo mid dhaqan ku sifeeyey dagaalka gobalka Sool. – Puntlandtimes
JIGJIGA(P-TIMES)- Madaxweynaha Ismaamulka Soomaali State ee dalka Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlayay qaar kamid ah Ergooyinkii beelo ku dagaalamay gobalka Sool, oo gaaray magaalada Jigjiga si ay uga qeybgalaan gogosha nabdeed ee la dhigay halkaas ayaa sheegay in loo baahan yahay in lasoo afjaro dagaalada ku dhisan macno la’aanta.
Madaxweynaha ayaa kusifeeyey dagaalada gobalka Sool, kuwa ay keenen guuldarooyinka siyaasiga ah iyo kuwa dhaqanka, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in wadajir looga gudbo marxaladaha xasaasiga ah ee dul-hoganaya mandiqada oo dhan.
Mr, Cagjar ayaa cadeeyey in ay maamulkiisa ka go’an tahay sidii loo dardargalin lahaa dibu heshiisiinta beelahan walaalaha, loona soo afjari lahaa dagaalada Ahliga ah ee ay geysteen khasaare xoog badan oo ka gaaray dhinac kasta oo ay ummaddan lahayd.
Wada hadalsiinta labada beelood ee ku dagaalamay gobalka Sool, ayaa ka bilaabanaysa magaalada Jigjiga, waxaana kharashka ku baxaya oo dhan bixinaysa dawlad deegaanka Soomaalida, iyadoo ay sidaas oo kale fududeynayaan Isimadda dhaqanka ee Beelaha Daaroodka, gaar ahaana Kablalaxa oo door weyn ka ciyaaray sidii loo joojin lahaa.
Madaxweynaha Soomaali State wuxuu madasha kaga dhawaaqay in 30 Arday oo kasoo jeeda gobalka Sool, ay dawladdiisu ugu deeqday deeq waxbarasho, wuxuuna sheegay in Jahliga oo lala dagaalamo ay keeni karto in laga gudbo dhaqanka qabyaaladda ku dhisan, loona gudbo bulshad caafimaad qabta.